Kooxda Juventus Oo Labo Xidig Midkood Ku Badalaneysa Paul Pogba
HomeHoryaalka IngiriiskaKooxda Juventus oo Labo Xidig midkood ku badalaneysa Paul Pogba
December 18, 2020 Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Wargeysyada 0
Juventus ayaa lagu soo waramayaa diyaar u yihiin inay bixiyaan Paulo Dybala si Manchester United uga soo qaataan xidiga Paul Pogba.
Iyadoo wakiilka Pogba Mino Raiola uu qirtay in waayaha xidiga reer France ee Old Trafford ay soo dhamaatay, Juve ayaa loo arkaa kuwa ugu cadcad inay la soo wareegaan laacibkoodii hore sanadka soo socda.
Raiola ayaa qirtay in bixitaanka xidiga ay u badantahay bisha Janaayo, laakiin Juventus ayaa lagu soo waramayaa inay weli ka walwalsan tahay inaysan awoodin inay lacag toos ah ugu iibsadaan Pogba ka dib masiibada coronavirus.
Sida laga soo xigtay ESPN , Dybala ayaa sidaas darteed ah hal ciyaaryahan oo loo soo bandhigi karo Red Devils si loogu badalo Pogba, iyadoo ciyaaryahanka reer Argentin uu ku dhibtoonayo inuu boos joogto ah ka helo Andrea Pirlo .
Federico Bernardeschi ayaa la rumeysan yahay inuu yahay ciyaaryahan kale oo loo isticmaali karo qeyb ka mid ah heshiiska, iyadoo United ay suuqa ka raadineyso garab cusub ka dib markii ay ku guuldareysatay inay hesho Jadon Sancho.
Qandaraaska Dybala ee Juventus ayaa dhamaan doona 18 bilood ka dib, inkasta oo Andrea Agnelli uu shaaca ka qaaday in Old Lady ay u soo bandhigtay 27 jirkaan heshiis cusub iyadoo ay jiraan warar ku saabsan mustaqbalkiisa.